warkii.com » “Marka la daawado filimkeyga ugu horreeyay, waxaan u heystay in dadka ay i garan doonaan sidaas darteedna aanan adeeg doonan karin” – Atariisho caan ah oo soo xasuusatay filimkeedii ugu horreeyay iyo sida ay dadweynaha u arkeen
“Marka la daawado filimkeyga ugu horreeyay, waxaan u heystay in dadka ay i garan doonaan sidaas darteedna aanan adeeg doonan karin” – Atariisho caan ah oo soo xasuusatay filimkeedii ugu horreeyay iyo sida ay dadweynaha u arkeen
Jilaayaasha soo gala filimada iyadoo aysan jirin cid taqaana, waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ku aaddan inay durba magac iyo maqaam ku helaan doorarkooda jilliin.
Atariishadii sameysay filimka Bulbbul ee Tripti Dimri ayaa sheegtay haddii ay ahaan lahayd filim sameeye inay filimadeeda u dhiiban lahayd jilaayaal daawadayaasha keeni kara tiyaatarka.
Tripti ayaa daaha ka rogtay in filimkeeda ugu horreeyay ee Laila Majnu ay usoo daawasho tagi jireen labo illaa shan daawade, taasna ay qalbi jab ka qaadday, iyadoo carrabka ku adkeysay inaysan eedeyn filim sameeyayaasha iyo daawadayaashaba.
Tripti ayaa la weydiiyay inay qalbi jab dareentay markii tiyaatarrada la saaray filimkeedii ugu horreeyay ee Bollywood-ka, waxaana ay ku jawaabtay: “Waxaan u maleynaa inaysan caddaalad ahayn in la eedeeyo dadka, Xiddigaha waalidkooda kusoo galay, shirkadda filimada iyo xiddigaha soo galootiga ahba. Waa sida ay ay tahay, iyo sida xaqiiqda, waana inaan wajahnaa.” ayay ku sheegtay wareysi ay siisay Pinkvilla.
“Waxaan u maleynaa in filimkeyga ugu horreeyay ee Laila Majnu uu toddobo maalmood saarnaa, aniguna aad ayaan u xiiseynaayay, waxaana daawanayay maalin walba oo ka mid ah toddobaas maalmood, waayo waxay ahayd markii ugu horreysay oo aan shaashad weyn aniga iska daawado, waan xamaasadeysnaa.
“Balse intaas kaddib, waxaan mararka qaar arkayay iyadoo ay joogaan kaliya 20 qof, marmar shan qof, ama hal ama labo qof, taasna xaqiiqdi qalbigeyga ayay jabisay” ayay hadalkiisa kusii dartay xiddigtan.
Iyadoo tusaale usoo qaadaneysa Kartik Aaryan oo ah xiddig Bollywood-ka aanan ku imaan qaraabeysi sidoo kalena bandhig wanaagsan sameynaya, ayay sheegtay Tripti in haddii ay filim sameeye ahaan lahayd ay filimadeeda u dhiiban lahayd atoore dadka ka gadi kara filimka, waxaana ay qarash gareynta filimka ku tilmaamtay ganacsi faa’ido laga doonayo.
Iyadoo Tripti ka hadleysa qalbi jabkii ay kala kulantay markii uu soo baxay filimkeedii ugu horreeyay, waxay tiri: “Ka hor inta aanan Laila Majnu la soo deynin, waxaan saaxiibbadey u sheegaayay in marka uu so baxo filimka kaddib aanan suuqa ka soo adeegan karin, maadaama ay dadka oo dhan i wada garan doonaan, balse taas ma aysan dhicin, waana niyad jabay, sidaas oo ay tahay, waan maareeyay xaaladdaas.” ayay tiri Tripti Dimri.